Momba anay - Hebei Weaver Textile Co., Ltd.
Manolo-tena amin'ny fanodinana lamba sy varotra.
Niorina nanomboka ny taona 1996. Ny vokatra lehibe eto aminay dia karazan-doha sy kofehy isan-karazany.amin'ny fanitarana ny orinasa dia nanangana orinasa fanaovana satroka 3 sy ozinina kambana 3 izahay.
Mampiasa ny rafitra famolavolana mandroso sy ny fampiasana ny fitantanana rafitra fitantanana kalitao iraisam-pirenena mandroso ISO9002 2000 ny orinasa.
Amin'izao fotoana izao, ny masininay dia avo lenta avokoa. Amin'ny alàlan'ny fomba fiaraha-miasa marobe, ny vokatra dia aondrana any amin'ny firenena sy faritra maro, toy ny: Etazonia, Kanada, Espana, Torkia, Fanjakana Mitambatra, Netherlands, Failandy, Aostralia, atsimo Afrika, Korea atsimo, Emirà Arabo Mitambatra, Vietnam, Brezila, Malezia, India, Thailand, Morocco, Bangladesh, Guatemala, Etiopia. Ankehitriny ny orinasan-tsika dia nametraka fifandraisana fiaraha-miasa maharitra amin'ny mpivarotra vahiny sasany.
Namolavola vokatra marobe izahay izay nandalo ny fenitra momba ny rafitra fitantanana kalitao iraisam-pirenena ISO9002 2000.
Orinasa natokana hananganana fiaraha-miasa maharitra amin'ny mpanjifa manerantany izahay.
Ny tanjonay dia ny hanananao loharano lehibe amin'ny satroka lamba isan-karazany, kofehy fanjairana polyester, kofehy fanjairana kofehy fototra ary satroka kamio.
Nampihatra fenitra fifehezana kalitao henjana izahay mba hahazoana antoka fa ny mpanjifanay any Amerika Avaratra sy Eoropa dia afaka mahazo vokatra avo lenta amin'ny tsena manerantany miova haingana.
Manantena ny hiara-hiasa amin'ireo namana mpandraharaha eto an-toerana sy any ivelany izahay ary hamorona ho avy tsaratsara kokoa!